Kuthekani ukuba iiBlogger ziqhubeke nogwayimbo? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 23, 2007 NgoMgqibelo, Novemba 24, 2007 Douglas Karr
Xa ndibhala iposti enje, ndiziva ngathi ndiqinisekile ukuba ndinomsindo Uphando Amandla-oko. Isakhono sebhlog yam 'yokufunyanwa' sisitshixo kwimpumelelo yayo. Ngapha koko, ngaphezulu kwesiqingatha seendwendwe zam zivela kwiinjini yokukhangela mihla le, uninzi luvela kuMama kaGoogle. Ndisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba ndibeka ikhaphethi ebomvu kuGoogle ngayo yonke into ebalulekileyo kunye neemeko ezibenza bancume kum.
UGoogle uye wabeka i-gauntlet kuyo uninzi lwabantu ngesihlwayo 'seekhonkco ezihlawulelweyo' kumxholo wabo. Abanye bade baba njalo unyanzelwe ukuba abhale kwaye apapashe ileta yokunikezela.
Kodwa ndiya ndikhathele yile nto. Sukundenza impazamo, ndisoyika kakhulu uGoogle kwaye ndisebenzisa izicelo zabo yonke imihla. Bayinkampani engakholelekiyo kwaye ndonwabile ukuba ubukho babo benza ukuba abanye abantu abakhulu bazichame iibhulukhwe zabo. Esinye sezizathu zokuba ndiyithande i-Intanethi kungenxa yokuba ilingana ngokulinganayo.
Wenza malini uGoogle ngale Bhlog?
Ndibhalile ngaphezulu kwezithuba ze-1,000 kule bhlog kwaye ndineendwendwe ezingama-500 ngosuku ezisuka kuGoogle. Masithi, ngenxa nje yengxoxo, ukuba uGoogle wenza malunga neesenti ezili-10 kube kanye xa kusetshiwe. Ke ngenxa yokukhangela okungama-10 endize kuko, bekukho uphando olungama-500 ikhonkco elihlawulelweyo licofiwe, lilingana ne- $ 50. Ukulunga kuGoogle, ndingu-5.00 kuphela kwiziphumo ezili-1 kwiphepha, ke masithi ndiyanceda ukubonisa iisenti ezingama-10 kumgca osisiseko weGoogle mihla le. Ukuphela konyaka, mhlawumbi ndincedise uGoogle ekwenzeni i $ 50.
Ndiyaqonda ukuba sisibalo esididayo, kodwa eyona nto ndiyithethayo yile… sibhala umxholo onesalathiso esihle kuGoogle… kwaye uGoogle uyakwazi ukuthengisa amakhonkco aHLAWULWAYO ngokusekwe kuloo mxholo. UGoogle wenza imali ngokukwazi kwethu ukubhala umxholo omkhulu kunye nesalathiso kakuhle, kodwa asivumelekanga ukuba sisebenzise umxholo kwabanye. Yintoni eyenza indawo yam ibenomdla kubathengisi ayisiyokufundwa nje, ikwindawo yokubekwa kweinjini yokukhangela. UGoogle uxela ukuba zizikhundla zethu, hayi thina, nangona ingabo abenze wonke umsebenzi onzima wokufika apho!
Iinkampani zikaGoogle zokubulala
Iinkampani ezifana PayPerPost ziya kuqhutywa phantsi, kunye nabanye abafana Iintengiso Zekhonkco kuye kwanyanzeleka ukuba ahambe phantsi komhlaba. UGoogle uqalile imfazwe kwaye uzimisele ngokupheleleyo ukuyilwisa sonke kuba sinokuthi sichaphazele ezantsi.
Kodwa khange sincede ukuqhuba loo nto iphantsi? Ndicinga ukuba senze njalo! I-75,000,000 blogs kwi-Intanethi ziqhuba i-TON yomxholo omnandi kumnyango kaGoogle. Endaweni yokuba silindele into eza kubuya kuGoogle, sicela kwaye sithandazele ukuba basikhombise kakuhle kwaye rhoqo.
Inkqubo yeDewey Decimal
UGoogle uxelela iibhlogger ukuba zinokuthini kwaye azinakwenza ntoni ngeebhlog zazo ziya kufana neDewey Decimal System exelela ababhali into abanokuyenza nabangakwaziyo ukuyibhala ezincwadini zabo.
UGoogle ubetha ngeenxa zonke iibhlog ezimbalwa ezihlawule intlawulo yindlela eyaziwayo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngoozwilakhe kunye neenkosi zamakhoboka. Khupha abachasi abambalwa phakathi kwezikhundla kwaye ubabethe kakuhle… kwaye wonke umntu uya kuhlala esebenza kwaye avale umlomo.
Ukunyaniseka kuMlobi, "Kukho umntu ohlawule ukukhankanywa kwincwadi yakho? Uxolo Mnu. Umbhali, sikutsalela kwisalathiso. Ukuba abo bantu banqwenela ukuqatshelwa, baxelele ukuba basibhatale kwaye siza kubanika indawo abayifunayo. ”
Umbhali, "ngoko ke ndiyenza njani imali?"
UDewey, "Ewe, ngokubakho kwisalathiso sethu uza kufumana abafundi abaninzi."
Umbhali, "Yima, ngaba ayizukunceda ukugcina ulwahlulo olungcono oluza kutsala abafundi ngakumbi kwaye, ngenxa yoko, uthengise imveliso oyifakileyo?"
UDewey uyahleka, “Ngokuqinisekileyo uya kuthanda! Kodwa ukuba awumameli kuthi, akukho mntu uza kufunda incwadi yakho. ”
Anditsho, konke konke, oko kuGoogle ityala mna. Ndiyakholelwa nje ukuba lo ngomnye umzekelo omkhulu wenkampani ngobuvila izama ukukhusela umthombo wokuqala wengeniso ngokuqhekeka kumfana omncinci. Endaweni yokuphuhlisa iindlela ezingcono zokuhlalutya idatha yeemeko kunye nokuhlela amakhonkco ahlawulelweyo xa kuthelekiswa namakhonkco e-organic, ukuthatha kukaGoogle indlela elula.
Nanku lo mbuzo, kuya kuthini ukuba siye saya “Kuqhankqalazo”? Kuthekani ukuba iibhloko ezingama-75,000,000 zigqibe kwelokuba zilahle ifayile yeerobhothi kwaye ziyeke uGoogle angazikhombisi… zonke! Yintoni iGoogle ezakusala nayo ngelo xesha? Baya kushiyeka benokupapashwa kumaphepha-ndaba kunye neewebhusayithi zenkampani. Ekupheleni kosuku, ayizizo ezo amakhonkco ahlawulelweyo? Ngeyiphi iGoogle ngaphandle kwethu?
Ndiyazi apho ndingabikho ngaphandle kukaGoogle, nangona kunjalo, ndiza kuba sisicaka esilungileyo kwaye ndilandele imigaqo.
Akunyanzelekanga ukuba ndiyithande imigaqo, nangona kunjalo.
tags: Ukubeka iliso kwi-geosocialUhlalutyo lwempembeleloisininziUmvakalisiUhlalutyo lweemvakalelomarblesindibaniselwano yecrm yoluntuuhlalutyo kwimidiya yoluntuukujonga ividiyoUhlalutyo lwentsholongwane
Nov 24, 2007 kwi-12: 43 AM
oku kundikhumbuza ngeposi endiyibhalileyo ngenye imini
Yibhokisi yabo yesanti kwaye kude kube yenye-enebhokisi yesanti ebhetele iza ... kulungile ukuba kufuneka sidlale ngemithetho kaGoogle
Nov 24, 2007 kwi-8: 27 AM
Ndicinga ukuba uxhomekeke kwimeko yesalathiso sakho ukuqhuba ukugcwala kwindlela yakho ukuze wenze inyani ungangcono ekudlaleni umdlalo kaGoogle. Okanye, njengoko uchazile, faka ikhowudi ethile exelela iirobhothi zikaGoogle ukuba zihambe.
Impendulo yam yokuqala yayilula… kutheni ungabhali umxholo ongcono ukuze abantu bakufumane kumfundi wesondlo? Andikaze ndiguquke kwaye ndafumana ibhlog yakho kodwa ndiyibonile ikhankanyiwe kwibhlog yomntu endiyithandayo ndaza ndayongeza kumfundi wam.
Enye indlela ekhawulezayo endiyaziyo yokuqhuba umxholo kukubhala kakubi malunga nento ethile. Ndihlala ndifumana i-10x yezithuthi xa ndibetha into ngokuchasene nokubhala nje umxholo "B".